Badhasaabada xaafadaha magaalada Sioux City waxay soo saareen bayaan ay ugu baaqayaan dhammaan
By Halima Osman • Apr 27, 2020
Badhasaabada xaafadaha magaalada Sioux City waxay soo saareen bayaan ay ugu baaqayaan dhammaan ururada caafimaadka bulshada in ay kordhiyaan heerka daah furnaanta ee ay ugu soo sheegaan bulshada kiisaska COVID-19 ka dib markii ay soo kordheen kiisas cusub.
Badhasaabyada Magaalada Sioux, Sergeant Bluff, Waqooyiga, Koofurta iyo Magaalada Dakota ayaa saxeexay bayaanka.
Lambarrada kiisaska togan ee COVID-19 ee aagga metro ee Sioux City ayaa si weyn u booday Khamiista
By Halima Osman • Apr 23, 2020
Lambarrada kiisaska togan ee COVID-19 ee aagga metro ee Sioux City ayaa si weyn u booday Khamiista.
Degmada Dakota waxay aragtay kororka ugu weyn iyadoo 133 kiis oo cusub oo iskucelcelis ah ay yihiin 246.
Taasi waa in ka badan labanlaab hal maalin gudaheed.
Gobolka Woodbury wuxuu la kulmay isugeyn hal maalin oo dhan sidoo kale, iyadoo 46 xaaladood oo dheeri ah oo wanaagsan ay dhamaantood ahaayeen 158. Sideed iyo labaatan ayaa soo kabsaday.
Tyson Foods ayaa hakisay howlihii ay ka waday xarun hilibka doofaarka ee Waterloo
By Halima Osman • Apr 22, 2020
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo tebisay 107 kiis oo wararka COVID-19 ah oo gobolka ah, kuwaas oo ay ku jiraan 19 kale oo dheeraad ah oo ka dhacay Gobolka Woodbury. Inta badan kiisaska maxalliga ah waxay ka yimaadeen dadka da'doodu u dhaxayso 18 iyo 60. Waxaa jiray toddobo dhimasho oo dheeri ah oo wadarta 90 ahayd.
Talaadadii, saraakiisha caafimaadku waxay ku dhawaaqeen geerida koowaad ee Gobolka Woodbury.
Gobolka Woodbury wuxuu arkay geerida ugu horeysa ee COVID-19
By Halima Osman • Apr 21, 2020
Gobolka Woodbury wuxuu arkay geerida ugu horeysa ee COVID-19.
Dhibbanaha ayaa ah nin u dhexeeya da'da 61 illaa 80 kaasoo aan isbitaal la dhigin. Wuxuu ku dhintay guriga.
Shir jaraa'id galabnimadii Talaadada, saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ayaa ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay ka hortagga faafitaanka cudurka. Waxay dadka ku booriyaan inay guryahooda joogaan intii suurtogal ah gaar ahaan markay hawadu sii wanaajiso.
Madaxa Fulinta ee Xarunta Caafimaadka Beesha Siouxland wuxuu leeyahay dad badan ayaa la ildaran cudurka.
Reynolds ayaa ku dhawaaqay jimcihii in dhamaan iskuulada la xiri doono dhamaadka sanad dugsiyeedka
By Halima Osman • Apr 17, 2020
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa ku dhawaaqay jimcihii in dhamaan iskuulada la xiri doono dhamaadka sanad dugsiyeedka.
Waxay tiri waxay ahayd go'aan adag in la sameeyo, laakiin gobolka kama uusan dhicin COVID-19.
Reynolds wuxuu kaloo yiri cudurku wuxuu galaaftay nolosha afar qof oo dheeri ah wadar ahaan 64 Iowans.
Waxaa jira 191 xaaladood oo cusub, oo dhamaantood ah 2,332. Taasi waxaa ku jira afar kiis oo cusub oo ka dhacay Gobolka Woodbury.
Hadda waxaa jira 26 dhimasho ah oo ka dhacay COVID-19 gudaha gobolka Iowa.
By Halima Osman • Apr 7, 2020
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa xaqiijisay 102 kiis oo cusub maanta oo isugeyn ah 1,048.
Buena Vista ayaa hadda lagu daray liiska 78 degmo oo hadda la arko cudurka.
Warshadda Tyson ee Cuntada Storm Lake waxay ka qaadataa dheyri dheeraad ah xarun doofaar xiran oo ku taal koonfurta-galbeed Iowa.
In kabadan labo iyo toban shaqaalaha Columbus Junction ah ayaa laga helay cudurka 'coronavirus'.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha
By Halima Osman • Apr 3, 2020
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha waxay ku dhawaaqday 85 kiis oo dheeri ah oo ah COVID-19 oo loogu talagalay guud ahaan gobolka oo dhan 699.
Kiisaska cusub waxaa ku jira shan kale oo Siouxland ah iyo gobollada Woodbury, Monona, O'Brien, Sioux iyo hadda Plymouth.
Hoggaamiyayaasha Dimuqraadiga ee aqalka Iowa iyo senate-ka ayaa ku boorriyay Guddoomiyaha Jamhuuriga Kim Reynolds inuu soo saaro amar rasmi-joog ah oo guriga lagu joojinayo si looga hortago faafidda COVID-19.
By Halima Osman • Apr 2, 2020
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo sheegaysa 66 kale oo Iowan ah oo laga helay cudurka 'coronavirus' laba kalena waa dhinteen.
Waxaa jira seddex kiis oodheeri ah oo ka jira Gobolka Woodbury iyo mid ka jira Clay County oo wadarta 20 ah waqooyiga-galbeed Iowa.
Laga soo bilaabo subaxnimadii. Khamiista, taasi waxay ka dhigeysaa tirada guud ee kiisaska togan ee Iowa illaa 614. Waxaa la soo sheegay in ka badan 8,000 baaritaanno xun.
Kow iyo toban Iowans ayaa hadda u dhintey dhibaatooyin la xiriira COVID-19.
Saraakiisha caafimaadka Iowa
By Halima Osman • Apr 1, 2020
Saraakiisha caafimaadka Iowa ayaa sheegaya in kiisaska cudurka 'coonavirus' Iowa ay kor u kacday 52, tirada guud ahaan gobolka oo dhan ka dhigaysa 549.
Laba dhimasho oo dheeri ah ayaa la soo sheegay Arbacadii. Labaduba waxay da'doodu ka weyneed da'da 81.
Fayrasku wuxuu hadda ku jiraa 60 ka mid ah 99-kii Iowa ee 99-kii oo ay ku jiraan Gobolka O'Brien ee waqooyi-galbeed Iowa.
Saraakiisha caafimaadka ee dowlada ayaa sheegaya in 63 ruux hada la dhigo isbitaal.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa ka warbixineysa 73
By Halima Osman • Mar 31, 2020
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa ka warbixineysa 73 kiis oo dheeraad ah oo ah COVID-19 Talaadada, taasoo guud ahaan gobolka ka dhigeysa 497 kiis.
Konton iyo toddoba degmo ayaa xaqiijiyey kiisas ay ku jiraan kiiska ugu horreeyay ee degmada Clay. Waxaa jiray laba kale oo dheeri ah oo laga xaqiijiyey Sioux County in ka badan 15 Siouxland.
Tijaabadu wali waa xadidan tahay gobolka, markaa tirada dhabta ah ee kiisasku waxay u badan tahay inay aad u weynaato uguna baahsan tahay.
Mid kale oo Iowan ah ayaa ku dhintey, waana dhimashada toddobaad ee gobolka.
By Halima Osman • Mar 30, 2020
Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in COVID-19 ay dileen labo Milkiileyaal ah, guud ahaan lix dhimasho ah. Waxaa jira 88 muunado oo tijaabo ah oo laga soo qaaday 424. Saddex ka mid ah kiisaska cusub waxay ku yaalliin Monona County waxoogaa waqooyi-galbeed Iowa. Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa Isniintii sheegay in 101 kiis oo COVID-19, ay ka badan yihiin labanlaab tirada kiisaska tan iyo Khamiista. Dhanka kale, kiiska ugu horreeyay ee la xaqiijiyey ee COVID-19 waxaa laga soo sheegay waqooyiga-galbeed Scotts Bluff County. Taasi waxay ka dhigaysaa Nebraska wadar ahaan 120.